Maalinta: Juun 24, 2019
Smart Bicycle ka socda ISPARK ilaa Küçüksu
ISPARK, oo faafisay ISBIKE “mashruuca baaskiilka caqliga leh üzerinde ee wadooyinka baaskiilka ee ay dhiseyso Dawladda Hoose ee Magaaladda Istanbul ee magaalada oo dhan, waxay ku soo bandhigtay baaskiiladaha caqliga leh isticmaalka muwaadiniinta aagga Madaddaalada Küçüksu. SPARK wuxuu gartay tiro weyn [More ...]
CHP Mersin Ku-xigeenka Av. Cali Mahir Basarir, shil tareen oo ka dhacay Tarsus maanta ayaa keenay ajandaha baarlamaanka. CHP Basarir, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Mehmet Cahit Turhan ayaa rabta in qoraal ahaan looga jawaabo [More ...]
Gaadiidka Sarkaalka-Sen, "Maya 6461 Law Turkey on Xorreynta ee gaadiidka Tareenka" Inkastoo baahida loo qabo TCDD Gaadiidka Inc. ayaa loo wareejiyay wasaaradda sigaarka dareewal TCDD General Directorate, ayaa codsaday in la iibiyo ah in la sameeyo. Agaasimaha Guud ee TCDD [More ...]
Degmada Shanliyaxfuur Building 6 Boulevard
Iyada oo la wanaajinayo xaaladaha xilliyeed, Dawladda Hoose ee Magaalada waxay sii wadaysaa howgalladeeda si xawli ah ayey ushaqeeyaan una sii wadaan dhismayaasha 6 boulevard isla waqtigaas bartamaha magaalada. Meelo cusub oo deegaanka ah oo ku yaal bartamaha magaalada ee gaadiidka aan xayiraadda lahayn [More ...]
Dhaqdhaqaaqyada ayaa si degdeg ah uga soo dagay Dugsiga Carruurta Waxbarashada Carruurta ee Şanlıurfa
Duqa Magaalada Caasimadda Şanlıurfa Zeynel Abidin Beyazgül, waxaa socda dhismihii Beerta Caruurta ee Taraafikada. Si loo yareeyo dhibaatada taraafikada ee magaalada Şanlıurfa, xaafadaha waaweyn ee magaalooyinka waaweyn, isgoysyada, marinnada iyo isgoysyada [More ...]
Diyaargarowga Gaadiidka Muhiimka ah ee ka socota Erzurum Ciraaq
Dawlada Hoose ee Magaalada Erzurum waxay laamiheeda kala baxday baaxaddeeda “Codsiyada Gaadiidka Gawaarida Lugaha Hore”. Si kor loogu qaado wacyiga ku saabsan hirgelinta, kooxaha magaalooyinka waaweyn waxay awood u yeelan doonaan inay abuuraan guri siman iyo saddex midab oo midabo casaan iyo caddaan ah meelo kala duwan oo magaalada ah. [More ...]
Degmadda Tarsus ee Mersin, tareenka xamuulka ayaa ku dhuftay saxan 63 LZ 951 oo qaada shaqaalaha beeralayda heerkulka. Shilkaan, dadka 1 ayaa la dilay, dadka 2 ku dhaawacmeen. Tarsus ee Mersin [More ...]
Gaadiidka magaalada Antalya waxay doonayaan in ay kor u qaadaan xirfadaha
Lataliyaha Madaxa Dawlada Hoose ee Magaalada Antalya Av. Cansel Tuncer, Antalya Rugta Ganacsadayaasha iyo Ururka farshaxaneyaasha oo ay soo abaabuleen hoggaanka kulanka ayaa dhagaystay dhibaatooyinka ganacsiga gaadiid. Xaliimo ayaa cadeeyay inay noqon doonaan kuwa raacaya dalabaadka iyo talooyinka wuxuuna yidhi [More ...]
30 oo ah Saldhigga Bas Baska ee Dhameystiray
Duqa Magaalada Magaalada Caasimadda ah ee Mu .la Cusmaan Gürün, qiimaha dhulka ee 24 Million 600 ሺህ TL, saldhigga basaska ee 45 Milyan 548 Kun TL iyo 4 Milyan TL tamarta cadceedda [More ...]
Mashruuca Mitrooga Kadib Doorashooyinka Madaxtooyada IMM
Xerada cusub ee Golaha Magaalooyinka ee magaalada Istanbul (IMM), 23 ayaa malaayiin cod ka bixisay bishii Juun. Sida laga soo xigtay natiijooyinka rasmiga ah ee SBE Madaxweynaha Sadi Guven, CHP iyo GOOD Party [More ...]
Tilmaamo muhiim ah oo ka imanaya SAMULAŞ! Daylight Saving Time wuxuu ka bilaabmay Gaadiidka
Adeegyada gaadiidka ee Samsun, SAMULAŞ ayaa ku dhawaaqday in ay bilaabi doonto in ay hirgaliso barnaamijka safarka xagaaga laga bilaabo Juun ilaa Juun. Gaadiidka Mashruuca Degmada Samsun Mashruuca Mashruuca Imar Inşaat Yat. San. iyo Tic. Inc. (SAMULAŞ), qor [More ...]
Waddooyinka Waddooyinka ee Kaynarca
Dowladda Hoose ee Magaalada Sakarya waxay sii wadaysaa howlaha dayactirka asphalt ee qaybo kala duwan oo magaalada ah. Macnaha guud, kunka 500 mitir ee dhaadheer ee isku xira Degmadda Sabırlı iyo Wadada Kaynarca ayaa waxaa la kulmay Dowlada Hoose ee Magaalada. Metropolitan [More ...]
Author waaberiga Horizons Fund, in la qabto bishii December ee soo bandhigidda ee macaamiisha in design gaariga ayaa sheegay in Turki ay wax ka dhahaan. Horizons Fund, oo aroortii ah, "Turkey ee loogu talagalay macaamiisha auto" maqaal uu daabacay hoos horyaalka "bandhigga lagu qaban doono December [More ...]
Dib-u-dhiska Aqoonsiga Mid ka mid ah Qodobbada Muhiimka ah ee Dalxiiska ee Ordu
Waxaa buuxiyay Golaha Dib-u-wareejinta ee Dawladda Hoose ee Magaalada Ordu oo ahayd udub-dhexaadka muwaaddinka. Mitir laba jibaaran oo laba jibaaran oo ah '150 square iyo' 2 dabaq gadaal ah, oo laga dhisay meel u dhow saldhigga gaadhiga fiilada ee degmada Altınordu [More ...]